उडेको केहि मिनेटमै रूसी विमान दुर्घटना, २९ जना यात्रु हराए — Imandarmedia.com
१मदिरा पिएर उपद्रो मच्चाउने एमालेका चर्चित नेता पक्राउ
२ओमिक्रोन संक्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छ ? अनिवार्य थाहा पाउनुहोस
३चीनिया सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युवक रिहा
४राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद धरापमा
५राप्रपाको ‘गाई’ एमालेको ‘सूर्य’ चिन्ह खारेज हुने भएपछि ओली र राजेन्द्र तनावमा
६युक्रेनले ८ हजार अमेरिकी सेना मैदानमा उतार्दै, अब के गर्ला रुस ?
७सापकोटाले ओलीसहित एमालेका ९१ सांसदलाई निष्कासन गर्न लागेका हुन् ? एमालेमा खैलाबैला
८यी हुन् गुरु बराललाई हराउने एमाले सांसद, यस्तो थियो अन्तरघातको डिजाइन्
९रहेनन बाबुराम भट्टराई, यस्तो अवस्थामा भेटियो शव
१०राष्ट्रिय सभामा सत्तागठबन्धनको वर्चश्व, १ सिट जितेर एमाले ‘क्लिनस्विप’ हुनबाट बच्यो
११मन्त्री रेणु कुमारी यादव जेल जाने पक्का ?
१२७ सिट गुमाए पनि एमाले नै पहिलो दल, नेताहरु सबै चकित
३शारीरिक सम्बन्धको सट्टा दिन्थिन् डिग्रीको सर्टिफिकेट, को हुन् उनि ?
४अपार्टमेन्टमा यौन धन्दा, डे बुकमा चर्चित ब्यापारीको नाम देखिएपछि हङ्गामा
५ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको अर्को काण्ड बाहिरियो, सुन्दा पनि अच्चम
६उडेको केहि मिनेटमै विमान दुर्घटना, चर्चित गायिकासहित आधा दर्जनको मृत्यु
७माओवादी महासचिवमा नयाँ पात्रको इन्ट्री, नाम सुनेपछि नेताहरु चकित
८विष्णु पौडेलको अर्को काण्ड बाहिरियो, ओलीले पनि जोगाउन नसक्ने
९विमानस्थलमा आ’क्र’मण, ६ जनाको घटनास्थलमै मृ’त्यु
१०प्रकाशमान सिंह सहित १३ जना कांग्रेसनिकट नेता रङ्गेहात समातिए
११भारत चीन सीमामा भिडन्त, ११ जना सैनिकको अवस्था गम्भीर
१२प्रचण्डको ऋण देखेर नेता कार्यकर्ता चकित
एजेन्सी । उडेको केहि मिनेटमै फेरि विमान भयानक दुर्घटना भएको छ । मङ्गलबार बिहान २९ यात्रु लिएर रूसको सुदुर पूर्वी क्षेत्रबाट उडेको रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
विमानमा छ चालक दलका सदस्यसहित २९ जना यात्रु रहेको रूसी समाचार संस्था स्पुटिनकले जानकारी गराएको छ।प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विमानमा एक बच्चा, छ चालकदलका सदस्य र २२ जना यात्रु थिए।
रूसको पेट्रोपाभलोस्क–कामचास्कीबाट पालानाका लागि उडेको विमान कामचात्का क्षेत्रबाट मङ्गलबार अपरान्ह रार्डरसँग सम्पर्क बिच्छेद् भएको रूसी आपतकालीन सेवा मन्त्रालयको प्रमुख महानिर्देशनालयले जानकारी गराएको छ। विमानबारे थप जानकारी सङ्कलन भइरहेको रूसी प्रशासनले बताएको छ।
त्यस्तै फिलिपिन्समा आइतबार भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ५० पुगेको यहाँको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ । फिलिपिन्सको एउटा सैनिक विमान हवाई मैदानमा अवतरण गर्नेक्रममा आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
त्यसमा परेर आइतबार नै कम्तीमा पनि १७ जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो । सैनिकहरु चढेको उक्त विमानमा सवारमध्ये अरु घाइते थिए । ती घाइतेमध्ये केहीको मृत्यु भएपछि सोमबार मृतकको संख्या ५० पुगेको फिलिपिन्सको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
सी–१३० हर्कुलस विमानमा ९२ जना सवार रहेका बताइएको छ । सुलु प्रान्तको जोलो द्वीपस्थित विमानस्थलमा अवतरण गर्नेक्रममा नजिकैको आवासीय क्षेत्रमा आइतबार मध्याह्न विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रसारित दृश्यहरु र प्रकाशित तस्बिरमा दुर्घटनाग्रस्त विमान भुँइमा बजारिएसँगै आगलागी भएको देखिएको छ । विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको नजिकै घरहरु माथि बाक्लो कालो धुँवा पनि ती दृष्यमा देखिएको छ ।
सोमबार एकजना सैनिक जर्नेलले दिएको समाचारमा त्यस दुर्घटनामा ९६ जना यात्रु रहेका र तीमध्ये ५० जनाको ज्यान गएको छ । अरु घाइते रहेका छन् । उनका अनुसार दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा ४७ जना सैनिक छन् । अरु तीन जना गैर सैनिक नागरिक रहेका छन् । सो विमान यहाँको सेनाको रहेको बताइएको छ ।
सो विमान कागायान डी ओरोबाट दक्षिणी मिन्डानाओ द्वीपतर्फ सैनिकहरु लिएर गैरहेको थियो । उनले जोलोमा विमान अवतरण गर्न लाग्दा नजिकैको आवासीय क्षेत्रमा खसेको पनि बताए । फिलिपिन्सको रक्षा मन्त्रालयले दुर्घटनाको कारणका बारेमा सरकारले अनुसन्धान शुरु गरेको जानकारी दिएको छ । सेनाका प्रवक्ताले सो विमानको दुर्घटनाका बारेमा आइतबार साँझदेखि नै अनुसन्धान शुरु भएको बताएका छन् ।
मदिरा पिएर उपद्रो मच्चाउने एमालेका चर्चित नेता पक्राउ
ओमिक्रोन संक्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छ ? अनिवार्य थाहा पाउनुहोस
चीनिया सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युवक रिहा
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद धरापमा
राप्रपाको ‘गाई’ एमालेको ‘सूर्य’ चिन्ह खारेज हुने भएपछि ओली र राजेन्द्र तनावमा
युक्रेनले ८ हजार अमेरिकी सेना मैदानमा उतार्दै, अब के गर्ला रुस ?
सापकोटाले ओलीसहित एमालेका ९१ सांसदलाई निष्कासन गर्न लागेका हुन् ? एमालेमा खैलाबैला
यी हुन् गुरु बराललाई हराउने एमाले सांसद, यस्तो थियो अन्तरघातको डिजाइन्
रहेनन बाबुराम भट्टराई, यस्तो अवस्थामा भेटियो शव
राष्ट्रिय सभामा सत्तागठबन्धनको वर्चश्व, १ सिट जितेर एमाले ‘क्लिनस्विप’ हुनबाट बच्यो